Shan ciyaaryahan muhiim ah oo seegay tababarkii ugu dambeeyey Real Madrid, kuwaasoo la filayo inay maqnaadaan kulanka Eibar - Hargeele - Wararka Somali State
(Madrid) 08 Nof 2019. Kooxda Real Madrid ayaa suurtogal noqon karta in safkeeda laga waayo ugu yaraan shan ciyaaryahan kulanka ay habeen dambe naadiga Eibar ku booqan doonaan horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Sida uu shaaca ka qaaday wargeyska “AS” ee dalka Spain ciyaartoy muhiim ayaa seegay tababarkii ugu dambeeeyay oo ay kooxda sameynaysay kahor kulanka habeen dambe ee kooxda Eibar, waxaana tirada xiddigaha tababarka seegay lagu sheegay ilaa iyo Shan ciyaaryahan oo ka tirsan naadiga Real Madrid.
Ciyaartoyda laga dhex waayay tababarkii ugu dambeeyay ay sameysay kooxda Real Madrid kahor kulanka Eibar ayaa waxay kala yihiin Gareth Bale, James Rodríguez, Marcelo, Nacho Fernandez iyo Marco Asensio oo kal horeba dhaawac jilibka ah garoomada kaga maqnaa.
Marcelo ayaa haatan sugaya tijaabooyin caafimaad si loo ogaado heerka uu gaarsiisan yahay dhaawicii ka soo gaaray kulankii tartanka Champions League ay kooxda Galatasaray ku xaaqeen 6-0.
Daafaca reer Brazil ayaa garoonka ka baxay 42 daqiiqo markii ay ciyaartu socotay, wuxuuna tababare Zinedine Zidane bedelkiisa keensaday xiddiga reer France ee Ferland Mendy.
Gareth Bale kama uusan qeyb qaadin wax tababar ah tan iyo markii uu soo laabtay, halka James Rodríguez uu maqnaa tan iyo bartamihii isbuucii hore, sababa la xiriira inuu u dhashay wiilkiisa labaad, halka Nacho Fernandez uu weli sii wado howgalka uu kaga soo kabanayo dhaawaca uu haatan garoomada kaga maqan yahay.
Real Madrid oo tartan gaar ah ku garaacday kooxaha Barcelona iyo Liverpool